kulan loogu tacsiyeynayo Ehelada Xasan Fantastic oo lagu qabtay Boosaaso + Sawiro – SBC
kulan loogu tacsiyeynayo Ehelada Xasan Fantastic oo lagu qabtay Boosaaso + Sawiro
Kulan Balaran oo saaka lagu qabtay Xarunta Wasaarada Warfaafinta Ee Puntland ee Boosaaso oo ay ka so qeybgaleen Masuuliyiinta Warbaahinta Gobolka Bari iyo Wariyaasha Gobolka ayaa waxaa tacsi loogu diray Eheladii iyoi Asxaabtii uu ka baxay Wariye Xasan Cismaan Cali Fatntastic oo ahaa Agaasimihii Idaacada Shabelle Ee Muqdisho.
Ugu horey waxaa Goobtas ka hadlay Cumar Dheere Tifaftiraha Waregeyska Ileys oo ka soo baxa Magaalada Boosaaso waxana uu sheegay in kulanka muhiimadiisa ay tahay sidii loo muujin lahaa tacsida loo dirayo Ehelka Xasan Fantastic.
Kulanka oo ay goobjog ka ahaayeen Dhamaan Maamulada Xarumaha Warbaahinta Waaweyn ee Deegaanada Puntland ayaa waxaa hadalo kala duwan ka soo jeediyay Agaasimayaasha Idaacadaha SBC,Daljir,1Nation,ETN iyo Wakiil wareedyada Teleshinada Soomaalida ee Caalamiga ah waxaana dhamaan xubnaha halkas ka hadlay ay tacsi u direen ehelkii Wariyaasha iDaacada Shabelle oo ay uga tacsiyeyeen Dilka Naxdinta leh ee loo geystay Madaxii idaacadaas.
Kulanka waxaa Sidoo kale loogu baaqay Ayaa waxaa baaq loogu diray Hayadaha amaanka ee DKMG oo loogu baaqay inay sharciga sida ugu dhaqsaha Badan ku keento Falka Dilka cidii ka danbeysay waxaana Wariyaasha Gobolka Bari ay Sheegeen in Kulankan ay ku canbareynayaan falkan Mid guracan oo la doonayo in lagu cabsi geliyo u helanayaasha Shacabka Soomaaliyed.
kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Wakiilka Ururka Suxufiyiinta NUSoj ee Gobolada Puntland C/wali Xasan Gooni oo sheegay in uu aad uga xunyahay Falalka noocan oo kale ah ee lagu cabsi gelinayo Saxaafada Xorta ee ka shaqeyneysa Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku shaqeynaya Daruufaha adag iyo Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin Dagaalada Joogtada ah.